सरकारलाई एउटा चिकित्सकको ध्यानाकर्षण #covid19 • Health News Nepal
PPE Issue in Nepal
एम.डि. एनेस्थेसियोलोजी एण्ड क्रिटिकल केयर मेडिसिन
काठमाडौं चैत ,२२
कोभिड-१९ मा चाहिने Personal Protective Equipment (पि पि ई) स्वास्थ्यकर्मीले भन्दा विद्युतीय कर्मचारीले, गाउँपालिकाका नेता तथा स्वास्थ्यकर्मी जहाँको अस्पतालमा फिभर क्लिनिकमा स्क्रिनिङ बाहेक अन्य केही हुँदैन ,तिनीहरुले बढी प्रयोग गरेको सोसियल मिडियामा छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ।
नेताहरुले N95 मास्क लगाउने, हस्पिटलमा बिरामीलाई जाच्ने स्वास्थ्यकर्मीले कपडाको सधारण मास्क प्रयोग गरेको फोटोहरु पनि बाहिरिएको छ ।पिपिई पनि उपलब्ध नगराइने र बिरामी नहेरे लाइसेन्स खारेज गरि दिने जस्ता कुराहरु सचिब स्तरीय बैठकमा पारित पनि भयो।
लाइसेन्स खारेजीका आफ्नै नियम कानुन छ्न यो नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दायित्व हो। तर यसमा सरकारकै प्रतिनिधिहरुले स्वास्थ्यकर्मीहरु प्रती एकतर्फी र नकारात्मक निर्णय लिदा हाम्रो मनोबल धेरै गिरेको छ।
यस्ता किसिमका स्वास्थ्य सेवा सङ्ग मन्त्रालयले गर्ने बैठकमा नेपाल चिकित्सक संघ र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष र सचिबलाई उपस्थित अनिवार्य गरियोस् ।उहाँहरुलाई सामेल गरि निष्कर्ष गरेमा अति उत्तम हुने थियो।
PM Bangladesh Sheikh Hasina
बाङ्लादेशमा पि पि ई को दुरुपयोग रोक्न लिएको कदम र दिल्लीमा स्वास्थ्यकर्मीको सर्भिस सम्मान गरेको निर्णय स्वागतयोग्य छ र यस्तो निर्णयले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च बनाउने कुरामा दुई मत छैन। जसले गर्दा ज्यान जान सक्ने सेवाको अनुरोधमा समिति गठन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याए ।अनि हाम्रो सरकारले डिमोटिभेट गरेर सामुहिक राजिनामा दिन बाध्य बनाउदै छ्न जस्तो लाग्छ!
विश्व स्वास्थ्य संघले पि पि इ को लागि भन्छ- “डाक्टरलाई रोग नलागे मात्रै बिरामीको सेवामा तनमनले लाग्छन् र अरु बिरामीको जीवन बचाउन सकिन्छ ।त्यसैले पिपिई लगाउनु आवश्यक छ” ।
पि पि इ लगाउदा स्वास्थ्यकर्मीलाई रिस्क नहुने होईन रिस्क कम हुने मात्र हो। इटली ,चाइना ,अमेरिका जस्ता देशहरूमा पिपिई लगाएर काम गरेका चिकित्सकहरुको पनि ठूलो संख्यामा मृत्यु भएको खबर छ।नेपालमा पि पि इ कम भए यस्तो महामारीको बेला के हालत होला । बिकसित देशमा यो रोगको नियन्त्रण गर्न गाह्राे छ भने हाम्रो देशमा कस्तो अवस्था होला।
अरु देशमा बिकास हुदाहुदै पनि फेल खाएको अवस्था छ। यदि कम पिपिइ छ भनेपनी दुरुपयोग किन ? अनि फोटो खिचाउन फेसबुकमा हाल्न प्रयोग किन ? चिकित्सक र नर्स प्रत्यक्ष बिरामी सङ्ग उपचारमा खटिने हुँदा ज्यानकै रिस्क छ।
सरकारले यस्तो देशकै आकस्मिक अवस्था हुँदा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यक पि पि इ उपलब्ध गराइदिनु पर्यो। हामीलाई भत्ता भन्दा पनि अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध र मनोबल उच्च बनाउन मद्दत गरि दिनुहोस। काम गर्छाैं ,खटिन्छौ भन्दा झन मनोबल किन घटाइदिएको ? यो “स्वास्थ्य” बिषय किन पढेछु भनेर पछुतो लाग्ने बाताबरणको सिर्जना रोकियोस।
बङ्गलादेशले पिपिइ मिस्योज कसरी रोक्यो र भारत सरकारले सरकारी र निजि स्वास्थ्यका स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवाको अनुरोध गरेर कसरी मनोबल बढाइ यो सेवा कार्यान्वयन गर्यो भन्ने हामीले पनि सिक्न जरुरी देखिन्छ ।
अन्तमा: चिकित्सक मेडिकल पढाईले बनाएको हो। हामी पनि अरु जस्तै मान्छे हौं । हामीलाई पनि दुख्छ ,पोल्छ , हामीपनि कसैको छोराछोरी,बुवा-आमा ,दाजुभाइ तथा दिदिबहिनी हौं ।हाम्रो नि तपाईं जस्तो परिवार छ।
जसले सधैं हामी ड्युटीमा जादा हाम्रो चिन्ता लिइरहेका हुन्छन् । यो देश हाम्रो पनि हो, सरकार हाम्रो पनि हो,हामीलाई पनि माया गर्नुहोस ।न्यूनतम चाहिने अत्यावश्यक पि पि इ र उपकरण उपलब्ध गराइ दिए हामी स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्य सेवामा सधैं हाजिर छौं । धम्की ,डर ,त्रासले काम गर्न सकिन्न गराउन पनि सकिन्न ।हामी सम्पुर्ण स्वास्थ्यकर्मीको तर्फबाट मेरो यो सानो बिन्ती टक्र्याउन चाहन्छु ।
हजुरको ध्यानाकर्षण होस।धन्यवाद !!